၀ န်ကြီးချုပ်ချုပ်ချုပ်ခါးစည်းအကန့်အစင်း Bandeau Bandage Bikini အစုံ - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်အကောက်ကင်း ၀ ယ်ရန် | WoopShop®
စပျစ်သီးစပ်ချုပ်ပညာမြင့်မားခါးလောက် Ruffle ခံရသောဒဏ်ချက်အား Bandeau ပတ်တီးရေကူးဝတ်စုံနဲ့သတ်မှတ်မည်
$22.54 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $44.19
အရောင် WC0264D1 WCD01821 WCD01822 WCD01823 WCD01824 WCD0182B1
S / WC0264D1 M / WC0264D1 L / WC0264D1 XL / WC0264D1 XXL / WC0264D1 S / WCD01821 M က / WCD01821 L / WCD01821 XL / WCD01821 XXL / WCD01821 S / WCD01822 M က / WCD01822 L / WCD01822 XL / WCD01822 XXL / WCD01822 S / WCD01823 M က / WCD01823 L / WCD01823 XL / WCD01823 XXL / WCD01823 S / WCD01824 M က / WCD01824 L / WCD01824 XL / WCD01824 XXL / WCD01824 S / WCD0182B1 M / WCD0182B1 L / WCD0182B1 XL / WCD0182B1 XXL / WCD0182B1
စပျစ်သီးအစုံလိုက်ချည်ထည်အမြင့်ခါးပတ်ကြိုးအစင်း Bandeau ပတ်တီးဘစ်ကီနီအစု - S / WC0264D1 backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
pattern အမျိုးအစား: အစိုင်အခဲ, စပ်ချုပ်ပညာ, ပန်း, ပုံနှိပ်ပါ
ပစ္စည်း: polyester, Acetate, Spandex, လဲမှို့
ကျားမ: အမျိုးသမီးများ, အမျိုးသမီး, မိန်းကလေး, သမ္မတကတော်
ပုံစံ: Ladies ရေကူးဝတ်စုံ
လက်မအတွက် SIZE CHART (1)
tag ကိုအရွယ်အစား Fit ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံ Size ကို ဗြိတိန်နိုင်ငံ, AU နဲ့ Size ကို fit အီးယူ Size ကို fit ဂျပန် Size ကို fit Fit တွေဆီကနေ Fit ကိုခါးလောက် Fit က Hip
CM အတွက် SIZE CHART (2)
မှတ်စု: ကြောင့်ကွန်ပျူတာမော်နီတာ, အလင်းအိမ်, ဓာတ်ပုံပြပွဲပစ္စည်းကိရိယာများစသည်တို့နှင့်ထုတ်ကုန်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကိုဖောင်းနည်းနည်းခြားနားချက်တည်ရှိပါလိမ့်မယ်အကြားခြားနားချက်, သင်လက်ခံရရှိအမှန်တကယ်ကို item ဖတ်ရှုပါ: လက်စွဲစာအုပ်တိုင်းတာခြင်းကြောင့် 1-3 စင်တီမီတာသွေဖီခွင့်ပြုပေးပါ
Отправилипосылкуза 14 дней! Довольна။ Вподарокположилибраслетик
command le 26 Avril, reçu le 11 mai (avec3fériés entre deux jours), livraison très Rapid vers la ပြင်သစ်။ le maillot est ထိပ်, la ဖော်ပြချက်àညီ, je recommande
လှသောအဆင်း! ပုံမှန်အားဖြင့်အလတ်စားဝတ်ဆင်သော်လည်းအကြီးစားအမိန့်ကြောင့်ဿုံ fit!
купальниккрутойвсепоразмеру, какнафото, сидитидеальнонигденеторчитиневыпячивает
ဒီနေရာကနေ ... ဒီနေရာကနေထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်သည်။ အထွေထွေ muy buena atenciónတစ် ဦး ချင်းစီအတွက် demos unos díasmás de los previstos ။